Irako Andriamahazosoa Ammi “Mahereza fa ny olana misy foana…”
Nankalazaina tany Toamasina ny 12 hatramin'ny 19 aogositra ny ivon’ny jobily faha-50 taonan'ny FJKM sy ny faha-200 taona nahatongavan'ny LMS (London Missionary Society) teto Madagasikara.
Fanambaran’ny FFKM “ Aoka ho marina sy madio ny fifidianana ! ”
Nanao fanambarana lehibe ny FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara) nandritra ny Ivon’ny Jobily fankalazana ny faha-50 taonan’ny FJKM tany Toamasina ny faran’ny herinandro.
Faha 50 taonan’ny FJKM Sekoly lehibe roa no ho tsangambato
Ny 17 ka hatramin’ny 19 aogositra izao no hankalazaina any Toamasina ny jobily faha-50 taonan’ny fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM sy ny faha-200 taonan’ny Fidiran’ireo misionera avy amin’ny LMS teto amintsika.
Cohen Bera Manazava ny tsiambaratelon’ny baiboly
Hifarana amin’ny alatsinainy 13 aogositra ho avy izao rehefa nanomboka ny alatsinainy 16 jolay lasa teo ilay fampianarana entin’i Malakh Bera Cohen avy eo anivon’ny fikambanana Jodaisma Madagasikara Mesirima momba ny tsiambaratelon’ny Baiboly.
Marc Ravalomanana tany Ankaramalaza « Mila miorina amin’ny finoana isika »
Kiadin’i Madagasikara Mankalaza ny faha-85 taona nijoroany
Fiangonana FJKM Nahazo mpitandrina 111
Nanohitra izany hatrany anefa ny fiangonana sy ireo vahoakan’Antohomadinika ka niteraka fitohanana lavareny teny an-toerana mihitsy izany. Na izany aza anefa dia niroso ihany ny foibe ka niafara tamin’ny fivoahan’ny mponina sy ny mpivavaka tany an-tokotany ny raharaha, narahin’ny filazan’izy ireo fa anisan’ny lahimatoan’ny fampandrosoana an’Antohomadinika ity mpitandrina kasaina esorina ity ka tsy maintsy arovan’izy ireo. Niala maina ny foibe vokatr’izany. Marihina moa fa efa nisokatra omaly ny sekoly Fitahiana mandray ireo ankizy mpianatra eny Antohomadinika rehefa nakatona nandritra ny herinandro. Fanodinkodinam-bola teo anivon’io sekoly io no niandohan’ny olana raha tsiahivina. Amin’ny herinandro kosa no hivoaka ny didy momba ny fitorian’ny foibe ny mpitandrina ao an-toerana.